GADZIRISA ISINGAKWANISE KUISA MUTYAIRI GADZIRISO KUBURIKIDZA NEGEFORCE ZVAKAITIKA - NYORO
Gadzirisa Isingakwanise Kuisa Mutyairi Gadziriso Kuburikidza neGeForce Zvakaitika
Gadzirisa Isingakwanise Kuisa Mutyairi Gadziriso Kuburikidza neGeForce Chiitiko: Ini handina kukwanisa kumutsiridza madhiraivha eNVIDIA graphic kadhi kuburikidza neGeForce Zvakaitika, ndosaka ndichifanirwa kutsvaga imwe nzira iri kurodha pasi manyaira uye kuivandudza. Dambudziko riripo neGeForce Experience koni iyo yandisingazive kuti chii, saka pane kutambisa nguva yakawanda tione maitiro ekugadzirisa manyairi eNvidia.
Nemaoko Gadziridza Mutyairi kuburikidza neManeja eDhivha
1. Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuziva kuti ndeipi graphic Hardware yaunayo kureva kuti ndeipi iyo Nvidia graphic kadhi rauinaro, usanetseka kana iwe usingazive nezvazvo sezvo zvingave zviri nyore kuwana.
kuhwina bhutsu gumi kune nhema nhema necursor
2.Press Windows Key + R uye mune dialog box mhando dxdiag uye rova ​​pinda.
3. Mushure mekutsvaga kweiyo tebhu yekuratidzira (pachave nemaviri ekuratidzira tabo imwe yeiyo yakabatanidzwa graphic kadhi uye imwe ichave yeNvidia's) tinya pane yekuratidzira tebhu uye uwane yako graphic kadhi
vpn hapana internet yekuwana windows 10
4.Zvino enda kumutyairi weNvidia kurodha webhusaiti uye nyora izvo zvigadzirwa zvechigadzirwa izvo isu tangozoziva.
5. Tsvaga vatyairi vako mushure mekuisa iwo ruzivo, tinya bvuma uye dhawunirodha iwo madhiraivha.
6. Mushure mekubuditsa kurodha pasi, isa mutyairi uye iwe wakabudirira kugadzirisa ako madhiraivhi eNvidia nemaoko. Kuisirwa uku kunotora nguva asi unenge wabudirira kugadzirisa mutyairi wako mushure meizvozvo.
mahwindo gumi akarara mushure memaminetsi maviri
Kana nzira iri pamusoro ikasashanda kwauri edza iyi imwe nzira:
1.Rudyi tinya Iyi PC kana My Computer uye sarudza Zvivakwa .
2.Mukati Zvivakwa tinya pa Maneja weMidziyo .
3.Rudyi tinya uye shandisa Gadziridza Mutyairi Software pane iyo Ratidza kana Yakajairwa VGA Graphics Adapter kubva pane yako runyorwa runyorwa.
Nei mbeva yangu yekunzwa ichiramba ichichinja
4.Paint kunzira yeinobvisa NVIDIA driver folda (semuenzaniso. C: NVIDIA DisplayDriver xxx.xx windows_version Chirungu Display.Driver ). Kana iyi folda isipo, hauna kumbobvira wamhanyisa iyo yekumisikidza pamberi.
5.Restart PC uye maDhiraivha anofanirwa kunge ari padanho.
Ndozvazviri iwe wakabudirira Gadzirisa Asingakwanise kuisa Dhiraivhu Dudziro Kuburikidza neGeForce Chiitiko nyaya asi kana uchiri nemibvunzo ndapota inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
nei ligi irikutora ichinonoka
maitiro ekugadzirisa mutyairi kukanganisa windows 10
windows 10 inotonhora pachirongwa chekugamuchira
network icon isiri kuratidza mune taskbar windows 10
kunamira pane yekugamuchira screen windows 10